होसियार रहाैँ ! पानी चलाउदा वा नुहाईसकेपछी हात खुट्टाका छाला यसरी चाउरी पर्ने समस्या छ भने एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला – Sandesh Press
January 10, 2022 284
होसियार रहाैँ ! पानी चलाउदा वा नुहाईसकेपछी हात खुट्टाका छाला यसरी चाउरी पर्ने समस्या छ भने एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला । नुहाएपछि हाम्रो श`रिरको केही हिस्साको छा`ला खुम्चिने गर्दछ ।
हात, हत्केला, औलाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिएझै हुन्छ। आ`खिर यसको कारण के हो त ? केही व्यक्ति बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताउँछन् । पा`नीमा रहँदा हाम्रो छा`लाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन् जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ ।
तर वैज्ञानिक भन्छन्, यो केवल ओस्मोसिस मात्र होइन । वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् कि छालाको जुन हिस्सा चाउरी परेको छ, यदि त्यहाँको केही न`सा काटिदिने हो भने त्यसरी चाउरी पर्दैन । यसको मतलब चाउरी परेको छाला यो देखाउछ कि हाम्रो स्नायु प्रणाली बिल्कुल ठि`क काम गरिरहेको छ ।
अमेरिकी वैज्ञानिक मार्क चान्गिजी भन्छन् कि हाम्रो शरिर बदलियको वा`तावरण अनुसार आफुलाई पनि परिवर्तन गर्दछ। पानीमा छाला चाउरी पर्नु पनि त्यहि हो, कि हामी चीजहरुलाई ठिक ढंगले समाउन सकौं। सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धानको क्रममा यस्तो वि`शेषता बाँदरमा पनि भेटेका थियो ।
Prevपहिलो श्रीमान छोडेर आफूभन्दा ३३ वर्ष जेठो बाजेसगँ बिबाह गर्नुको कारण खोलिन (भिडियो हेर्नुस
Next४ दिनको छोरा छोडेर संसारबाट नै बिदा भइन यी आमा , टिकटकमा हालेको त्यो अन्तिम भिडियो
रुकुम जाने जहाजलाई नेपालगञ्ज अवतरण गराउने पाईलटको बारेमा बल्यो नेपाल वायु सेवा निगम
स्थानीयले कुटे सांसदलाई, सांसदको अवस्था गम्भीर र हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याईयो..